Kubatsira - Andeli Boka Co, Ltd.
Isu tinoita 100% yekuedza kwedu mukutsvagisa tekinoroji uye kuwedzera kwemitsara kune inoenderana LV uye HV zvigadzirwa zvemagetsi chete. Tiine makore anodarika gumi zvakaitika, isu tave neepamoyo hwetekinoroji ruzivo rwemagetsi & zvemagetsi zvigadzirwa uye zviuru zveyakajairika zvigadzirwa zvekusarudza kwevatengi.
Isu taigara tichisimbisa kukosha kukuru kune mhando kupfuura huwandu MuAndeli, zvigadzirwa zvese zvinofanirwa kutevedzera maitiro akaomarara uye akazara kubva kutsvagurudzo, dhizaini, prototype, kusarudzwa kwechinhu, kugadzirwa kwekuyedzwa, kugadzirwa kwemazhinji, kudzora kwemhando yepamusoro. Mukutonga nyaya, isu tine yakakwira mashandiro emakomputa manejimendi manejimendi kubva mukugamuchira maodha kudhipatimendi rekutengesa kuenda pakutakura kuti tione sevhisi yedu yepamusoro kune vatengi vedu.
Isu tinoona zvigadzirwa zvemagetsi zvinoda kusangana nezvinodiwa zvekushandisa nemidziyo yekupedzisira yemutengi. "Kugutsikana kweVatengi" isimba rinokurudzira Andeli kukura mune ramangwana. Isu tinotenda zvakasimba kuti uchagutsa masevhisi edu akazara, zvisinei nemafungiro, nguva yekupindura, ruzivo rwekupa pamberi pekutengesa, rutsigiro rwehunyanzvi, kuendesa nekukurumidza, mushure mekutengesa masevhisi, uye nyaya yemutengi yemhando yemutengi.
Isu tinosimbisa manejimendi. Nekudaro, isu tinoramba tichiita rationalism, standardization uye komputa mukufamba kwese kwebasa kuvandudza basa redu. KuAndeli, mumwe mushandi kazhinji anokwanisa kuwana basa revashandi vaviri kusvika vatatu vachirodha mumamwe makambani. Ndosaka tichigona kudzikisa yedu yakazara mutengo uye kudzikisa mutengo kune vatengi vedu gore rega.
Isu tinoziva kuti vanhu ndivo chinhu chakakosha kwazvo. Kuchengeta nezve mushandi kuzvikurira, kupa chirongwa chakakodzera chedzidzo, kuvaka nharaunda yekudzidza uye mweya wehunyanzvi unopa simba rekufambira mberi kwekukura kwedu mune ramangwana.
Nhasi, Andeli ave mumwe wevanotungamira vagadziri muChina, kunyanya mune yakajairwa mhando yemagetsi munda. Yedu 500M2 imba yekuchengetera inotibvumidza isu kuchengetedza zvakakwana masheya e30% yemamodeli akajairwa ekukurumidza kuendesa. Isu tinopawo sevhisi-inogadzirwa sevhisi (ODM) sevhisi iyo inogona kusangana nevatengi yakasarudzika yakatarwa inodikanwa ine pfupi yekuvandudza nguva.
Parizvino, isu tine gumi chete vanogovera uye zviuru zviuru zvevatengi vanogara munyika makumi mashanu pasirese. Kubva pane yedu yemakore gumi nemasere dhizaini, yekugadzira uye yekushambadzira zviitiko mumunda wemagetsi, isu tinotenda zvakasimba kuti tinogona kuva wako akanaka uye akavimbika mudikani zvachose mune ino mutsara.
Chekupedzisira, tinoda kuonga zvakapfuura zvinotsigirwa kubva kune vedu vatengi vepasirese kuve nhasi Andeli. Tinotarisira kuwana rutsigiro rwako rusingaperi uye unogona kuva wako akanaka uye akavimbika mudikani zvachose.